December 2017 – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
မဖြစ်နိုင်လို့လမ်းခွဲသွားသူကို နာကျည်းခြင်းမရှိပါနဲ့နှလုံးသားတွေ ပိုနာကျင်စေပါတယ်
31/12/2017 Yawthama0Comments
ထွက်သွားသူကို လှမ်းမျှော်ကြည့်မနေပါနဲ့နှလုံးသားတွေ အရမ်းနာကျင်စေပါတယ် ။ မချစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုသူကို တမ်းတမနေပါနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးစေပါတယ် ။ မုန်းတီးသွားသူကို စိတ်နာနေခြင်းမရှိစေပါနဲ့စိတ်တွေကိုပူလောင်စေပါတယ် ။ မဖြစ်နိုင်လို့လမ်းခွဲသွားသူကို
လူငယ်ပရိတ်သတ်တွေ ဆွံ့အသွားတဲ့ လွင်းမိုးရဲ့ သမီးကြီး ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ မကြာသေးခင်ကပဲ ပညာသင်ချိန်မှာ စာကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြိုးစားနေရလို့ ကျန်တာဘာမှ စိတ်မဝင်နိုင်ပါဘူးရှင့် ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး ဆိုပြီး မီဒီယာတွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ခု ဒီနေ့
ရစ်တတ်သော ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရင် ဒါတွေကြိုသိထားရမယ်နော်
ရစ်တတ်သော ချစ်သူနှစ်ဦးကောင်မလေး—အရူးလေး ဘာလုပ်စ် ကောင်လေး—ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့( ဆပ်မေးစေချင်နေတာ) ကောင်မလေး—အကောင်းမေးတာကို နင်ကလဲ ကောင်လေး—မေးမနေနဲ့ ငါ့ကိုသေစေချင်နေတာမလားကောင်မလေး—ဗုဒ္ဓေါ…ကောင်လေး—တွေ့လား အခုကတည်းကဘုရားပင့်နေပြီကောင်မလေး—မဟုက်ဘူးလေ… မပင့်ပါဘူးကြံကြံဖန်ဖန် ကောင်လေး—သြော်ဒါဆို သိပါပြီငါငရဲသွားရလည်း$ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ ကောင်မလေး—ဟာ အဲ့လိုဆိုလည်း ငါလိုက်ခေါ်မှာပေါ့ ကောင်လေး—ချီးစားပြောတောင်မယုံပူးးး(ကြည်နူးနေပြီ) ကောင်မလေး—တကယ်ပြောတာ ချစ်တုံးရဲ့ကောင်လေး—ငရဲကိုမလိုက်လာနဲ့ ငရဲသားနဲ့မှားနေလိမ့်မယ်
စိတ်ရင်းကောင်းသူတွေက အဆိုးရွားဆုံးသူတွေနဲ့ ဖူးစာဆုံရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀) ချက်
စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ ရည်းစားရဲ့စိတ်ထားကို မကြိုက်ပေမဲ့ ဖြတ်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်ကြတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ ထိုသူနဲ့ပဲ ဖူးစာဆုံပြီး တစ်ဘဝလုံး သည်းညည်းခံနေရတော့တာပေါ့။ စိတ်ထားကောင်းသူတွေအတွက် ရည်းစားက ဆိုးမှန်းသိပေမဲ့ ဖြတ်ရခက်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့…. ၁။ ကိုယ်က ဒီထက်အများကြီး
အချစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုကြည့်လိုက် မျက်ရည်နဲ့ ဒဏ်ရာတွေ အများဆုံးပဲ
နှလုံးသားထဲက အတွေး ___________________________  အချစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုကြည့်လိုက်  မျက်ရည်နဲ့ ဒဏ်ရာတွေ အများဆုံးပဲ……….. အလွမ်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ကြည့်လိုက်  သောကနဲ့ တမ်းတခြင်းတွေ အများဆုံးပဲ…… အမုန်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ကြည့်လိုက်
ဆေးထိုးအပ်ပဲ ကိုင်ရတဲ့ဘ၀ဆိုပေမယ့် မနုညံ့ပါဘူး . . .ခယောင်းလမ်းမှာ မောပန်းနွမ်းလျပေမယ့် အားတင်းထားဆဲပါ
ဆရာ ဆရာမများက ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ပေး ကာကွယ်ပေးနေကြတယ် ဆရာ ဆရာမလေးတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကတော့ လိုအပ်တာတွေက ရှိနေပါတယ် အဲ့ဒီလို တာဝန်နဲ့သွားလာနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ဆရာ ဆရာမ များအတွက် လုံခြုံးရေးအတွက် လိုအပ်တာလေးတွေတော့ သက်ဆိုင်ရာက ထည့်စဉ်းစား ပေးစေချင်ပါတယ်
သမီး ရည်းစား ဘဝ တွင် အတူနေထိုင်ပြီး လက်မထပ်သည့် အမျိုးသား များ ကို ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်နှင့် အထက် အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်း သွားမည် သမီး ရည်းစား ဘဝ
အောင် သူ ခင်း တဲ့ လမ်း ( သို့မဟုတ် ) ထိုင်းတွေရေးဆွဲနေတဲ့ မြန်မာဘောလုံးသမားပရိုမိုရှင်း
အောင် သူ ခင်း တဲ့ လမ်း ( သို့မဟုတ် ) ထိုင်းတွေရေးဆွဲနေတဲ့ မြန်မာဘောလုံးသမားပရိုမိုရှင်း ထိုင်းကလပ်နှင့်အောင်သူရဲ့ အပြီးသတ်စာချူပ်ချူပ်ဆိုပြီး မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာဘဲ ထိုင်းနာမည်ကြီးရုပ်သံတစ်ခုက အောင်သူရဲ့ အကောင်းဆုံးသွင်းဂိုးတွေကိုပြသရင်း စီစဉ်တင်ဆက်သူက ” မြန်မာမက်ဆီ ”
ခေါင်းပြတ် သတို့သမီး ****************ြ(ဖစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သဖြင့် နာမည်နေရပ်အတိအကျ မဖေါ်ပြတော့ပါ ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ပါနှင့်) ၁၉၉၆ လောက်က ခလရ(xx)က ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် မိတ္တီလာကို ခွင့်ပြန်လာပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးက အသားဖြူဖြူအရပ်မြင့်မြင့် သူ့ချစ်သူဟာလည်း ရုပ်ချောလှပသူဖြစ်ရုံသာမက မြို့မျက်နှာဖုံး
ရသမျှ မုန့်ဖိုးလေးကို ကြိုးစားပမ်းစားစုထားပြီး ပိုက်ဆံတွေမှိုတက်ကုန်လို့ သုံးမရတော့ဘူးဆိုပြီး ၀မ်းနည်းနေတဲ့ သားငယ်လေး
စိတ်မကောင်းပါဘူး ခလေးရယ် ပိုက်ဆံတွေ ကိုအရွယ်နဲ့မမျှအောင်စုတတ်ပေမယ့် မှိုတွေတက်ကုန်ပီး သုံးမရဖြစ်ကုန်တာပါ့။ အဖေ အမေနှင့် အဒေါ်တွေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေ ပေးသမျှကို အိမ်မှာ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အချိန် ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပေးသမျှ စုထားတာ ခုတော့ ကြည့်ပါဦးဗျာ . .